Ka anyị chefuo ihe merenụ ma laghachi na nnọkọ ahụ na 3 ... 2 ... .1 (mepụtara) - NYE Countdown for Djs, Vjs, Nightclubs 2019
SKU: DJ DROP 100 - #33 Category: DJ Drops
Ka echefukwala na mere ma laghachi na nnọkọ ahụ na 3 ... 2 ... .1 (mepụtara)
(Ihe nlele si hapụ okpu gị na) Uhhhhh ... .. Ọ bụghị ụlọ ọrụ ahụ. Enweghi ike iwepu ya! (Mepụtara)
Ị naghị adị njọ? (Mepụtara)
Chaị. Ị bụ onye nzuzu! (mepụtara)